Adeegso tarjumaan deg deg ah oo turjumaan ah: Taleefanka casriga ah ama aalado aad ku iibsato 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Markii aan dibedda u safrayno, dhibaatada ugu weyni waa shaki la’aan afafka qalaad: in kasta oo hadda qof kastaa ku hadlo waxoogaa Ingiriis ah, waxaan ku adkaan karnaa inaan isku fahanno dadka u dhashay meesha, gaar ahaan haddii ay iyagu ku hadlaan oo keliya. carrabka. Nasiib wanaagse, tikniyoolajiyadda tarjumaadda ayaa waddo dheer soo martay sannadihii la soo dhaafay waana suurtagal, iyadoo la adeegsanayo aalado yar oo la qaadan karo, hel turjumaad deg deg ah oo dhakhso leh intaan dood bilaabayno.
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa runtii turjubaanka ugu dhakhsaha badan inaad ka iibsan karto khadka tooska ah si aad ugu hadli karto oo aad ugu turjumi karto luqada maxaliga ah isla markaana aad u dhagaysan karto wada hadalada wada-hadalkeena isla markaana aad fahmi karto erey kasta oo la dhaho. Qalabkani waa mid waxtar badan oo wax ku ool ah waxaana loo isticmaali karaa safar kasta oo dibedda ah.
AKHRISO: Qaamuuska luqadaha badan ee ugu fiican iyo barnaamijka turjubaanka ee Android iyo iPhone
Tarjubaanada degdega ah ee ugufiican
Turjubaanada degdega ahi waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan, ka hor intaanan iibsan tusaalaha ugu horeeya ee aan isla markiiba helno, waxaa had iyo jeer mudan in la fiiriyo astaamaha ay tahay in qalabkani yeesho, markaa dooro kaliya moodooyinka ku habboon baahiyaheena. baahiyaha tarjumaadda.
Turjubaan waqtiga dhabta ah
Turjubaanka degdegga ah ee wanaagsan waa inuu lahaadaa astaamaha soo socda si loogu qeexo inuu yahay oo uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo dhammaan baahiyaha tarjumaaddayada:
Luqadaha la taageero- Mid ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan, maadaama ay jiraan tarjumaano badan oo kaladuwan oo kaladuwan oo la heli karo waana inaan dooranaa mid taageeraya ugu yaraan luuqadaha ama luqadaha ugu caansan ee laga yaabo inaan dhibaato ku qabno markaan dibadda ku suganahay. Markaa aan hubinno inay taageerto Ingiriisiga, Isbaanishka, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha, Jabbaan, Hindiga, iyo Boortaqiiska.
Hababka tarjumaadda- Marka lagu daro luqadaha la taageeray, aan hubinno in turjubaanka deg dega ah ee la doortay uu leeyahay habab turjumaadyo kala duwan. Midda ugu fudud ayaa ah tarjumaad toosan (laga soo bilaabo luqadda A illaa luqadda B ama taa beddelkeeda), halka moodooyinka qaaliga ah iyo kuwa horumarsan ay u oggolaanayaan tarjumaadda deg degga ah ee laba luuqadood oo kala duwan, iyada oo aan la riixin badhamada ama la habeeyo luqadaha ka hor wadahadalka (tarjumaadda labada dhinac) .
Xuduudaha kala duwan: si aad u awoodo inaad u tarjunto si hufan oo dhaqso leh, tarjumaada ugu badan ee deg degga ah waa inay ku xirnaadaan internetka, si looga faa iideysto matoorada tarjumaada internetka iyo caqliga macmalka ah ee ay soo saareen soo saarayaasha aaladan. Moodooyinka ugu fudud waxay ku xirmaan Bluetooth iyagoo adeegsanaya taleefanka casriga ah (oo sidaas darteed had iyo jeer lagu xirayo internetka), halka moodooyinka kale ee qaaliga ah ay leeyihiin Wi-Fi, Bluetooth iyo kaar gaar ah oo SIM ah oo awood u leh inay si madax bannaan ugu xirmaan xaalad kasta.
Madax-bannaanida: maadaama kuwani ay yihiin aalado la qaadi karo, waxay leeyihiin baytariyo gudaha ah, oo awood u leh inay damaanad qaadaan ugu yaraan 5-6 saacadood oo turjumaad ah ka hor inta aan si rasmi ah loo soo dejin. Xaaladdan oo kale, waa lagama maarmaan in marwalba la qaado xeedho USB ah oo la jaan qaadi kara ama, maadaama aan dibadda joogno, sidoo kale bangi awood leh oo ku filan (sida kuwa lagu arkay tilmaamaha Sida loo ilaaliyo had iyo jeer taleefankaaga casriga ah).
Cabbirka iyo qaabka- Qaabka iyo cabirka turjubaanka sidoo kale waa mid aad muhiim u ah, maadaama turjubaanka deg degga ah uu ahaado mid sahlan in la qabto oo waliba ku habboon in la shido oo la damiyo markii loo baahdo. In kasta oo aalado kala duwan oo qaabab kala duwan leh la heli karo, haddana waxaan marwalba isku daynaa inaan bartilmaameed ka dhiganno moodello qaab ergonomic ah (qaab duubayaal cod ah).
Haddii qalabku ixtiraamo astaamahan, waxaan ku tilmaami karnaa indhaheenna oo xiran, hubaal natiijada wanaagsan.
Turjubaano turjubaan ah oo aad iibsan karto
Ka dib markaan aragnay shaqooyinka ay tahay inay tarjumaanada isla markiiba yeeshaan, aan isla aragno aaladaha aan ka iibsan karno Amazon, taas oo had iyo jeer ka mid ahayd halbeegyada ganacsiga elektaroonigga ah ee internetka iyada oo ay ugu wacan tahay dammaanad buuxda, oo aan sidoo kale uga hadalnay hagaha . Dammaanad qaadida Amazon waxay dib u celinaysaa lacagtii lagu kharash gareeyay laba sano gudahood.
Kuwa ugu yar uguna raqiisan tarjumaada isla markiiba waxaan ka helnaa Travis Touch Go, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 200.
Qalabkani wuxuu u tarjumi karaa 155 luqadood qaabka laba geesoodka ah (turjumaadaha la heli karo wax ka yar hal sekan), wuxuu leeyahay Wi-Fi, Bluetooth iyo isku xirka xogta shabakadda (adoo adeegsanaya eSIM) isla markaana, marka uu ku xirmo internetka, wuxuu adeegsadaa sirdoon horumarsan. Nooca daruurta macmalka ah si uu nooga caawiyo tarjumaadaha waqtiga dhabta ah. Turjubaankan waxaa weheliya shaashad taabasho ah oo 2,4-inji ah iyo dhowr fure oo fure ah si loo xusho luqadda lagu turjumayo
Turjubaan kale oo deg deg ah oo wanaagsan oo aan tixgelin karno ayaa ah Tarjumaan Smart Vormor, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 250.
Qalabkani wuxuu leeyahay qaab ergonomic iyo isafgarad leh, shaashad midabkeedu yahay 2.4-inji iyo kamarad gadaal ah, si uu u qaabeeyo una turjumo xitaa boodhadhka iyo farriimaha aan ka heli karno waddooyinka dalka shisheeye. Waad ku mahadsantahay isku xirnaanta wireless, waxay kuu ogolaaneysaa turjumaad deg deg ah oo dhinac walba leh oo gaareysa ilaa 105 luqadood, iyadoo si sax ah loo hinaasi karo.
Haddii, dhanka kale, aan raadineyno turjumaano heer sare ah oo loo qoondeeyey macaamiisha ganacsiga, aaladda ugu horeysa ee la tixgelinayo waa Basque Mini 2, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 300.
Naqshadayntu waxay xusuusinaysaa jiilkii hore ee Apple iPod Minis, oo si sahlan loo qaadi karo, waxay sidoo kale la timid kiis raaxo leh, sidaa darteed marwalba waad nala qaadan kartaa adigoon ka baqayn waxyeello ama khasaaro. Turjumaan ahaan, waxay taageertaa illaa 50 luqadood, waxay bixisaa qaab tarjumaad laba geesood ah waxayna ku xirmi kartaa shabakad kasta oo xog mobiil ah bilaash, meel kasta oo adduunka ah (mahadnaq heshiisyada meeraha soo saaraha, oo dammaanad ka qaadaya marinka LTE)
Haddii, liddi ku ah, waxaan raadineynaa qalab turjumaad kooban oo wax ku ool ah oo laba dhinac ah sida sameecadaha dhagaha, waxaan diiradda saari karnaa badeecada-dhamaadka sare. WT2 Dheeraad ah, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 200.
Dhagaha sameecadahaani waxay soo xusuusinayaan Apple AirPods laakiin waxay u shaqeeyaan sidii laba-waddo iyo turjumaanno caalami ah, oo ay weheliyaan arjigu (in lagu rakibo aaladda gacanta). Markaad ku xidho barnaamijka tarjumaadda heeganka ah, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad u gudbisaa taleefanka gacanta wadahaaga oo aad bilowdaa inaad la hadasho taleefanka kale: waxaan ku hadli karnaa afkeenna, qofka kale hubaal wuu na fahmi doonaa, sidoo kalena wax walba waan fahmi karnaa. Ayuu yidhi. Tarjubaankan cajiibka ah ee la qaadan karo wuxuu tarjumayaa ilaa 40 luqadood oo kala duwan iyo 93 lahjadood, sidaa darteed waxaad sidoo kale fahmi kartaa wada hadalada gobolada gaarka ah ee wadanka la doortay.
U isticmaal taleefankaaga casrigaaga turjubaan waqtiga-dhabta ah
Adiga oo aan wax iibsan, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Qaabka turjubaanka Google-waqtiga-dhabta ah waa maxay saacaddu sidoo kale lagu dhex daray Kaaliyaha Google kaas oo hadda laga heli karo aaladaha Android iyo iPhone. Tarjumaaddu waxay taageertaa wadar ahaan 44 luqadood oo laga kala xusho, oo ay ku jiraan Carabi, Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Giriig, Talyaani, Jabbaan, Boortaqiis, Isbaanish, iyo kuwo kaloo badan. Marka qaabka tarjumaanka la hawlgaliyo, waxaad si fudud ugula hadli kartaa qalabka si tarjumaadda shaashadda loogu muujiyo oo kor loogu akhriyo Kaaliyaha Google, markaa waad la sheekaysan kartaa dadka ku hadla luqadaha kala duwan.
Sida loo kiciyo qaabka turjubaanka ee Kaaliyaha Google
Taleefankaaga, fur Kaaliyaha Google adoo dhahaya "Ok Google" ama adoo furaya abka Google kuna dhagsanaya badhanka makarafoonka barta raadinta. Si aad u bilowdo qaabka turjubaanka, kaliya dheh "Waad salaaman tahay Google, noqo turjumaankeyga Ruushka"ama luqadda aad rabto. Waxaad kaloo isticmaali kartaa amarrada kale ee codka sida:"Igu caawi inaan ku hadlo Isbaanishka"ama"Waxaan ka turjumayaa Romania ilaa Dutch"Ama si fudud:"Turjubaan Faransiis ah"AMA"Firfircoonida qaabka turjubaanka".
Saaxirku wuxuu markaas ku weydiin doonaa inaad taabo badhanka makarafoonka oo aad bilowdo hadalka. Shaashadda waxaad isla markiiba ka akhrisan kartaa tarjumaadda iyo jawaabo taxane ah oo ku saabsan luuqadda la tarjumay si aad u sii wadato wada hadalka hufan.
Illaa dhawr sano ka hor, turjubaanada caalamiga ahi waxay ahaayeen sheekooyin cilmiyaysan oo saafi ah, halka maanta si fudud looga iibsado Amazon sidoo kalena ay si fiican u shaqeeyaan, iyagoo naga caawinaya inaan ka gudubno caqabadda xagga luqadda marka aan u safrayno dibadda.
Had iyo jeer mawduuca turjubaanka, waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale akhriso hageheena Sida loo isticmaalo turjubaanka codka isla markaana loo wada turjumo.
Ma waxaan raadineynaa tarjumaan laba dhinac ah oo loogu talagalay Skype? Waxaan u adeegsan karnaa turjubaanka isku dhafan, sida sidoo kale ka muuqata tusaheena. Turjubaanka Skype oo ah tarjubaan maqal ah oo otomaatig ah oo ku hadla codka iyo fiidiyaha.
Sida loogu ciyaaro ciyaaraha PS5 aalada aan lahayn
7 qalabka lagama maarmaanka u ah shaqada caqliga leh
Siyaabo badan oo loo isticmaalo Mac Mini sida PC, TV Box iyo NAS
Waa sidee PS5? falanqaynta iyo hagaha Playstation-ka cusub
Huawei vs Xiaomi: yaa sameeya taleefannada casriga ah ee ugu fiican?
Kumbiyuutarrada kumbiyuutarka ugu fiican ee qaata meel yar
Sida loo doorto kombiyuutarkaaga iskuul ama kulleejo
Muraayadaha leh codka Bluetooth, ee muraayadaha indhaha oo aan ahayn
Kombiyuutarada kumbuyuutarka ee ugu fiican ee laga iibsado sanduuqa
Xeedho laptop-ka ahi ma shaqeeyo: sidee loo hagaajiyaa?
Hadlayaal Wanaagsan iyo Hadlayaal oo leh Kaaliyaha Google